Brezila: Tanàna 40 Nanatanteraka Ny Diabe Ho An’ny Fahafahana · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Mariana Freitas
Voadika ny 08 Jolay 2011 7:16 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Deutsch, Français, Português
Tanàna Breziliana 40 no hipoka ny arabeny noho ny diabe ho an'ny fahafahana ny Sabotsy 18 Jona 2011. Fifangaroana antoko, fikambanana, mpanao fihetsiketsehana, rafitra maro ary vahoaka tsy mankasitraka no niara-nitraotra. Ny nipoiran'io fitroarana tampoka io dia ny famoretana mahery vaika nataon'ny polisy tamin'ny Diaben'ny Marijuana tao São Paulo ny 21 May. [[Jereo ny lahatsary nataon'ny TV Trip tamin'ny andron'ny Diabe ho an'ny Marijuana]
Be loatra ny herisetra tamin'izany ka namoha ny hatezeran'ireo tanora an-jatony izay, novolavolaina tamin'ny alalàn'ny tambajotra sosialy toy ny Facebook, nanao ny Diabe ho an'ny Fahafahana voalohany tao São Paulo, ny faran'ny herinandro nanaraka io.
Ny Diabe ho an'ny Fahafahana voalohany tao São Paulo. Sary nalainà mpampiasa Flickr Marcel Bertoldi/Fora do Eixo (CC BY-NC-SA 2.0).
Ny antso [pt] ho amin'ny Diabe ho an'ny Fahafahana dia natao hikasika ny olona rehetra ary nandrisihana azy ireo hitaky ny fahalalahany haneho hevitra:
Ny fotoana nanehoan'ireo andianà vahoaka ny heriny, sy niarahany nivazavaza hoe TEZITRA! dia niha nitatra be ilay Diabe ho an'ny Fahalalahana Maneho Mevitra ny Sabotsy lasa teo. Tsy tamin'ny fahamaroan'ny olona, fa kosa tamin'ny fahamatorany, raha ny marina.
Nisy ny fibaikona, fitifirana, fanapoahana, fidarohana, bomba mandatsa-dranomaso ary fisamborana tsy amin'antony. Famonoana mivantana, fanompàna, voarakitr'ireo fitaovana fakàna sary an-jatony, vatana sy fo maro. Betsaka ny olona no nihevitra fa niharam-pamoretana ireo mpifoka marijuana.
Io andron'ny 21 May io, iray ihany no voatohitohina :Ny Fahalalahan'ny rehetra.
Tonga ho azy sady ara-politika ihany koa, nampiavaka ilay hetsika ny tsy fisian'ny ambaratongam-pahefana, mpitarika, fikambanana politika na firehan-kevitra. Nefa, toy ny valan'aretina ilay tsy fankasitrahana ka nihanaka nanerana ny tananà Breziliana 40.
Tanàna 40 nanao famoriam-bahoaka ho amin'ny Fahafahana ny Sabotsy 18 Jona 2011 lasa teo.
Ny ankamaroan'ny Fitsarana Breziliana dia nikasa ny hanelanelana ary ny 15 Jona ny Fitsarana Avo dia namoaka lalàna nanome fahafahana hanao fihetsiketsehana hitakiana ny haha ara-dalàna ny marijuana. Ilay fanapahan-kevitra dia fiantohana fa hoe afaka hizotra tsy hisy vely kibay, baomba mandatsa-dranomaso na baomba ireo mpanao fihetsikesehana.
Júlio Delmato, mpikambana ao amin'ny Coletivo DAR (DAR midika hoe Mamoha Saina) dia mino fa ny Diabe Faharoa ho an'ny Fahalalahana tao São Paulo dia fandresena manoloana ny famoretana:
Tsy ny androm-pirenena ho an'ny Diaben'ny Fahalalahana ihany no nomarihan'io Sabotsy io, fa koa ny fotoana voalohany nahafahanay nidina an-dalambe tao São Paulo ary nahafahanay niresaka ny politikan'ny rongony tsy nisy nanohintohina. ZZZZZ
Ny vaovao isaky ny tanàna tsirairay dia niampy ny fahalalahana hiteny. Lasa fitakiana toy ny fitakiana rehetra koa ny Marijuana. Midina an-dalambe koa ireo mpitolona manohitra ny tetikasa hananganana toby mpamokatra herinaratra ahodin-drano ao Belo Monte, manohitra ny lalàna vaovao mifehy ny Rano sy ny Ala izay nekena vao tsy ela izay, miady ho an'ny fanapariahana ny fampahalalam-baovao (média), ny fitanteram-bahoaka tsaratsara kokoa, ny fitovian-jo, manohitra ny fampiasana fanafody famonoana biby kely tsy ankanavaka, ny fiankahalàna ny olona mitovy nefa mifanambady.
Na dia ireo filazam-baovao nenti-paharazana aza tsy nahavita ny tsy hamoaka ny vaovaon'ilay Diabe ho an'ny Fahalalahana, nefa nafotaka kosa ny fandrakofana tany amin'ireo fampahalalam-baovao hafa. Ny Circuito Fora do Eixo [pt”], habaka iray ho an'ny asa ara-kolotsaina misy aminà toerana 72 manerana an'i Brezila, dia nampita lahatsary avy amin'ireo diabe maro tany amin'ny tanàna samy hafa.
Ny Gazety Brasil de Fato, mpiseho aminà andro voatondro ary noforonina tao amin'ny World Social Forum (sehatra iraisam-pirenena fifanakalozan-dresaka Sosialy) izay manangona fotsiny ny vaovaon'ny hetsika ara-tsosialy, dia nitatitra ilay Diabe ihany koa :
[Ny diaben'ny Curitiba] dia nokarakarainà andiana mpanakanto tsy miankina, antoko politika, mpiaro ny zon'ny vehivavy ary vondrona LGBT, mpiady amin'ny fanavakavahana, mpiaro ny tontolo iainana, mpianatra ary mpanao fihesiketsehana ara-tserasera.”Amin'ny ankapobeny, mahita tanora maka ny toeran'ny mpitarika isika amin'ny fikarakaràna ilay diabe sy ny hetsika rehetra mandrafitra azy”.
Nanoratra antony 22 andraisan'ny olona anjara amin'ilay Diabe ho an'ny Fahalalahana tao amin'ny bilaoginy ilay mpanao gazety Xico Sá. Ireto ny sasany amin'izany:
I) Mila mamerina indray ny fahafinaretana amin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe isika, na izany fizorana am-pilaminana, na fikasàna hitroatra. Ny lesona fahizay avy amin'ny mpivenjivenjy, ny hoe na ho isan'ireo mpandehandeha na ho isan'ireo mpitora-bato.
VII) Afaka mivadika ho fety ny hetsika. Manahirana kokoa ho an'ireo tsy misy atao azy sy ho an'ireo rafitra tranainy rehefa izay no mitranga.
IX) Maimaimpoana ny andraisana anjara amin'ireo fety ireo, fa ny ilaina entintsika ho eny an-dalambe kosa dia ny fo mahantrantsika sy mahari-pery.
XI) Ao anatin'ny filaharana no ahitanao ny fitiavana marina eo amin'ny fiainanao. Ilay fitiavana ambonin'ny firehan-kevitra mampiahiahy rehetra.
XIII) Eny, mikomy izahay nefa tsy mpandàny andro, raisinay ny buena onda, tandremo fa amin'izao fotoana izao izahay vao lasa mpanongam-panjakana kokoa.
XIV) Efa lasa ny tsy fivakiana loha, fotoana itenenana izao ary hampisehoana fa manana hazondamosina sy fanahy mahavita mitroatra isika.
XVIII) Raha tianao, esory ny akanjonao.
XXI) Mampalahelo izany andian-taranaka nandalo fiainana tsy nanao tabataba na savorovoro goavana teo amin'ny fisiany izany.
XXII) Manaitaitra filàna ny fitroarana, nandres ny fahafatesana ny filàna ara-nofo, ny fahafatesana izay manaiky hitafy ny akanjo mandry ho toy ny palitao hazo.
Diabe ho an'ny Fahafahana tao Brezila. Sary nalain'i Marcus Franchi Nogueira tao amin'ny Facebook (nahazoana alàlana)."
Indymedia Brazil, ny maro an'isa izay nanomana ilay Diabe ho an'ny Fahafahana tao Natal (Rio Grande do Norte) dia niantso ny mpiray tanindrazana aminy hilahatra:
Ny fitakianay dia tsy misy ambaratongam-pahefana. Ny resaka rehetra ao anaty diarinay dia avy amin'ny fomba fijery hiady hisian'ny fiarahamonina anjakan'ny fitoviana, ho amin'ny fiainana tsaratsara kokoa, miorina amin'ny fitiavana sy fifanajàna. Izahay rehetra dia mpandeha an-tongotra, mpamily, sembana mampiasa seza misy kodiarana, mpitrongy vao homana, mpianatra, mpiasa. Zokiolona, tompon-tany, sarim-bavy. Samy tsy manan-kialofana avy aty Avaratra Atsinanana, Boliviana, Breziliana.
Ary dia malalaka izahay.
Tao Brasília renivohitra, toy ny tao Natal, niaraka notanterahana tamin'ny Filaharan'ny Slut Walk, hetsika iray nataonà vehivavy maro mikatsaka fanajàna ny vatany sy ny fitafiny, ny Diabe ho an'ny Fahafahana.
Diabe ho an'ny fahafahana tao Cuiabá. Sary nalainà mpampiasa Flirck Ederson Deka (CC BY-NC-SA 2.0).
Ao Cuiabá, renivohitr'i Mato Grosso, na dia vitsy olona tsy araka ny noeritreretina aza, nizotra tamin'ireo lalambe isan'ny manana ny toerany ilay Diabe, izay ahitàna trano fisakafoana lafo vidy ary trano fandihizana. Niaraka tamin'ny hiaka mahazatra, sary lehibe sy kiririoka, isan'ny lehibe indrindra iny hetsika iny, mandiso ilay filazàna hoe tsy miraika ny tanora.
Firenena iray fantatra fa hoe any dia mora tohina ny ara- politika ary tarihinà andiana Parlemantera vitsivitsy, mandrafitra ny vondron'ireo mpanao ampihi-mamba maoderina, mitady fifampitifirana ao amin'ny faritra izay tokony ho fehezin'ny vahoaka, nandray ilay diabe tamin'ny alalan'ny horakoraka hafa kely ny tao Mato Grosso,araka ny fampahatsiahivan'ny bilaogy Rad Rocker:
Hira toy ny “Shake off that Riva” sy “Walter Rabelo, where are you?, we just came to see you” na “Walter Rabelo, aiza ianao? tonga eto izahay hamangy anao” no fanentanana hita hanakianana ny governemanta sy ny fanaovana ambanin-javatra ny fiarahamonina ao Cuiabá.
Tantara maro, fangatahana maro ary hetaheta ny hanova zavatra. Reraka nikiaka ho amin'ny fahamarinana, ny demokrasia ary ny zon'olombelona ny tao Brezila. Io no fanehoana mazava fa misy fetrany ny fandeferan'ireo vahoaka mijaly nefa sariaka.
Araka ny nolazain'i Xico Sá, afaka ny hiova ho fety ilay hetsika ary tsy hisy ankoatra izay ao Brezila. Orona mpanao hatsikana, sary lehibe ary akanjo fanaovana karnavaly, ireo no fomba hitan'ireo tanora an-tapitrisany hilazàna fa AMPY IZAY ny tsy mety rehetra..
Diabe ho an'ny fahafahana tao Belo Horizonte. Sary nalain'i Junia Mortimer/Coletivo Pegada, afaka jerena ao amin'ny Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Soratra miverina: Brasile: manifestazioni “per la libertà” in 40 città
[…] · Brezila: Tanàna 40 Nanatanteraka Ny Diabe Ho An’ny Fahafahana […]
15 Jolay 2011, 15:15